ကျိုက်တမော့ ဆံတော်ရှင်ဘုရားပွဲသို့ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက် > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
မွန် ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ Font
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ Mon News Agency
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်း
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ဆောင်းပါး
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မေးမြန်‌းချက်‌
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
မွန်အမျိုးသား ကိုယ်စားပြုပါတီဟု ဆိုသောအခါ
မွန်လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပဖြစ်မှာလား
မွန်ပြည်နယ် ခေတ္တရဲမှူး(ဦးစီး) စိုးလွင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
မွန်ပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
RFA Mon TV
ဒုတိယအကြိမ် မွန်နိုင်ငံရေးညီလာခံကို မေလဒုတိယပတ်တွင် ကျင်းပရန်လျာထား
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ပြည်နယ်အဆင့် JMC-S မဖွဲ့စည်းနိုင်သေး
မွန်ပြည်နယ်တွင် စည်းကမ်းမဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၂၀၀၀) ကျော် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NCA လုပ်ငန်းစဉ်ရှင်းလင်းပွဲ ဝယ်ဇင်စခန်းတွင် ဆက်လက်ပြုလုပ်မည်
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား (၃)ဦးက ရာဘာခြံပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကို ရိုက်သတ်မှုဖြစ်
NCA သည် မိမိတို့ပန်းတိုင်မဟုတ်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီပြော
Home / သတင်း / ကျိုက်တမော့ ဆံတော်ရှင်ဘုရားပွဲသို့ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်
ကျိုက်တမော့ ဆံတော်ရှင်ဘုရားပွဲသို့ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ November 5, 2015 သတင်း Leaveacomment 182 Views
ရေးသားသူ: စနောင်းတိုင်း > သတင်း
စနောင်းတိုင်း – မွန်ပြည်နယ်၊ ကမာဝက်မြို့တွင် နှစ်စဉ်ကျင်းပသော ကျိုက်တမော့ ဆံတော်ရှင်စေတီ ဘုရားပွဲ၏ စတုဒ္ဒိသာဇရပ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မွန်ပြည်နယ်
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအုန်းမြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာလ(၄) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီ အချိန်တွင် မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ စီမံ/ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းနွယ်စိုးနှင့် ဝန်ကြီးများ စတုဒ္ဒိသာဇရပ်ဖွင့့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကာ ဖဲကြိုးဖြတ်ပြီး စားဖွယ်များကို သုံးဆောင်ကြသည်။
“ဘုရားပွဲဆိုတာက မွန်လူမျိုးတို့ရဲ့ ဓလေ့တစ်ခုပါ။ကျိုက်တမော့ဘုရားပွဲ စည်ကားသိုက်မြိုက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဟာလည်း ကမာဝက်မြို့ လူထုတရပ်လုံးရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပုံရိပ်ပဲဖြစ်တယ်။ ဆရာတော်ဘုရားများရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ စတုဒ္ဒိသာဇရပ် အောင်မြင်ချောမွေ့စွာ ပြီးမြောက်သွားတာဟာ အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာပင်ဖြစ်ကြောင်း” ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသည်။
အလျား အတောင် (၁၀၀)၊အနံ အတောင် (၄၀) ရှိသော ကျိုက်တမော့ ဘုရားပွဲ၏ စတုဒ္ဒိသာဇရပ် သည် ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ယခုဆို (၉၀) ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီး၍ တည်ဆောက်မှုတန်ဖိုးမှာ ငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀၀) ကျော်ဖြစ်သည်။
“ဧည့်ခံကျွေးမွေးပွဲ အစီစဉ်အတွက် ကမာဝက်မြို့မှာ အုပ်စု လေးအုပ်စု လေးရွာ လေးရပ်ကွက် စုဖွဲ့ထားတယ်။ တစ်နှစ် တစ်နှစ်မှာ အုပ်စုတစ်အုပ်စုက ဦးစီးလုပ်ဆောင်ရမယ်။ ကျန်တဲ့သုံးဖွဲ့က အကူသဘောဖြင့် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။ ဒီနှစ်မှာ ထောင်ကေး အုပ်စုက ထမင်းဟင်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးပြီး၊ စိန်တောင်ရပ်ကွက်အဖွဲ့က လက်ဖက်ရည်နဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးသလို ကလော့သော့ရွာအဖွဲ့တွေကလည်း နှစ်တိုင်းလိုလို ဆန်ပြုတ်နဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါတယ်” ဟု ကမာဝက်မြို့ စာချဆရာတော် အသျှင်အတုလ မိန့်ကြားသည်။
ကျိုက်တမော့ ဘုရားပွဲ စတုဒ္ဒိသာဇရပ်သို့ လာရောက်ကြသော ဧည့်သည်တော်များအား ထမင်းဟင်းအပြင် ဆန်ပြုတ်နှင့် လက်ဖက်ရည်များပါ ဧည့်ခံကျွေးမွေးသည့်အပြင် ဘုရားပွဲညပိုင်းများတွင် ဇာတ်သဘင်ပွဲ (၄) ပွဲတို့ ကပြဖြေဖျော်လျက်ရှိရာလာရောက် အားပေးကြသော ပရိ်သတ် အရေအတွက်သည်လည်း သိန်းချီသည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
ယခင်နှစ်များ၌ မွန်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်အနေဖြင့် ကျိုက်တမော့ဘုရားပွဲသို့ တက်ရောက်ဖူးခြင်း မရှိသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနီးကပ်သည့်ယခုကာလတွင် စတုဒ္ဒိသာဇရပ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခြင်းသည် နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟု မြို့ခံ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကျိုက်တမော့စေတီသည် ကမာဝက်မြို့၏ အရှေ့ဖက် (၈) မိုင်ကျော်ကျော်ခန့် ၌ရှိသော တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ဘုရားရှင်၏ ဆံတော်ရှင်ကိုဌာပနာထားပြီး နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း သီတင်းကျွတ်လဆုတ် (၇-၈) ရက်နေ့တွင် ဘုရားပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်ကာ မွန်တိုင်းရင်းသားတို့၏ အထင်ကရ စည်ကားသော ဘုရားပွဲတော်ကြီးလည်းဖြစ်သည်။
စနောင်းတိုင်း သတင်း 2015-11-05
Tags စနောင်းတိုင်း သတင်း
Previous မဲလက်မှတ်ပေါ် ပါတီအရောင်များ လွဲမှားနေခြင်းကို ကန့်ကွက်စာတင်သွားရန်စီစဉ်နေ
Next မွန်ပြည်နယ်၌ တင်းမာမှုဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိသော မဲရုံ ၆ရ ရုံတွင် တပ်မတော်လုံခြုံရေးယူမည်
ဘီလူးကျွန်းသည် မော်လမြိုင်မြို့၏ အနောက်ဘက်ယွန်းယွန်း သံလွင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း ရေပတ်လည်ဝန်းရံလျှက်ရှိသော မွန်ပြည်နယ်ထဲတွင်ရှိသော ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းဖြစ်သည်။ ဘီလူးကျွန်းကို ကျေးရွာပေါင်း(၆၄)ရွာ ၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၄၆)အုပ်စုဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဟုလည်းခေါ်ဆိုသည်။ Related
နိုင်ရွှေသိန်း(NMSP) နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်(KIA)
နိုင်ဟံသာ(NMSP) နှင့် သတင်းထောက်များ
နိုင်ဟံသာ(NMSP) ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်(KIA) မစ္စတာ နမ်ဘီးယား
နိုင်ဟံသာ(NMSP) ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်(KIA) ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဌာန အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်
Join 50,639 other subscribers
Ethnic Program TV
ပျူလူမျိုးနှင့်ပျူနိုင်ငံတော် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို မွန်တိုင်းရင်းသားများကန့်ကွက်
October 30, 2012 17
October 28, 2012 13
October 25, 2012 6
လစာတိုးရန် ဘုရားသုံးဆူဖိနပ်စက်ရုံ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြတောင်းဆို
July 7, 2011 5
May 27, 2010 5
Nationwide Ceasefire Agreement isaForlorn Hope - Myanmar Information Zone: […] onlyacomplex stalemate. Union Peace Dialogue Joint Committee (UPDJC)...
HtoonAye: Naming the bridge that connected Bloo Kyun and Maulmein (Mawlamyine) over Thanlw...
HtoonAye: Diversity is natural law but unity is natural learned. When we are havingaprob...
HtoonAye: Protest against undesirable will of the people is truly righteous work and even...
HtoonAye: Erected and built by Mon, Kyaik Da Gon, real Mon's heart, we're keeping up. It i...
သတင်း မွန်ထော ယဉ်ချိုင်း မင်းသုတ ပိုင်နွန် မွန်သတင်းအေဂျင်စီ အိုက်စိုင်း ခတ္တာနန်း အာကာ စောဇင်ညီ သြမွန် အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါး မင်းပိုင် မော်လမြိုင် အယ်ဒီတာ့အာဘော် အေမီအောင် ဝံသမွန် ချစ်မင်းထွန်း ကေသီ မင်းချမ်းညီ AMDP စိုင်းမွန် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ မင်းသစ္စာခိုင်
AMDP MDF MDP NMSP ကေသီ ခတ္တာနန်း ချစ်မင်းထွန်း ဂျူရီချိုင်း စိုင်းမွန် စောဇင်ညီ ဆောင်းပါ ဆောင်းပါး ထိုင်း-မြန်မာ နိုင်သက်(ရေး) ပိုင်နွန် ဗီဒီယို ဘုရားသုံးဆူမြို့ မင်းချမ်းညီ မင်းတေဇာအောင် မင်းထက်အောင် မင်းပိုင် မင်းလုံး မင်းသစ္စာခိုင် မင်းသစ် မင်းသုတ မင်းသွေးသစ် မင်းအောင်ထူးနိုင် မိစားတားမွန် မော်လမြိုင် မေးမြန်းချက် မွန်ထော မွန်ပြည်သစ်ပါတီ မွန်သတင်းအေဂျင်စီ ယဉ်ချိုင်း လွတ်လပ်သော မွန်သတင်းအေဂျင်စီ ဝံသမွန် သတင်း သံဖြူဇရပ် သြမွန် အမြင်နှင့်သုံးသပ်ချက် အယ်ဒီတာ့အာဘော် အာကာ အိုက်စိုင်း အေမီအောင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေး သတင်း
Mon Organization OverSea
Mon Human Rights
Mon Studies in Thailand
The Mon Information Home Page
Archives Select Month April 2018 (20) March 2018 (25) February 2018 (14) January 2018 (26) December 2017 (50) November 2017 (41) October 2017 (51) September 2017 (31) August 2017 (47) July 2017 (44) June 2017 (55) May 2017 (51) April 2017 (31) March 2017 (65) February 2017 (48) January 2017 (53) December 2016 (41) November 2016 (37) October 2016 (48) September 2016 (31) August 2016 (52) July 2016 (61) June 2016 (69) May 2016 (51) April 2016 (28) March 2016 (56) February 2016 (29) January 2016 (44) December 2015 (15) November 2015 (32) October 2015 (37) September 2015 (52) August 2015 (34) July 2015 (11) June 2015 (18) May 2015 (21) April 2015 (31) March 2015 (32) February 2015 (39) January 2015 (42) December 2014 (34) November 2014 (43) October 2014 (30) September 2014 (33) August 2014 (39) July 2014 (27) June 2014 (25) May 2014 (23) April 2014 (21) March 2014 (37) February 2014 (26) January 2014 (31) December 2013 (13) November 2013 (27) October 2013 (25) September 2013 (23) August 2013 (26) July 2013 (41) June 2013 (32) May 2013 (28) April 2013 (17) March 2013 (16) February 2013 (18) January 2013 (43) December 2012 (20) November 2012 (44) October 2012 (25) September 2012 (26) August 2012 (37) July 2012 (45) June 2012 (35) May 2012 (51) April 2012 (34) March 2012 (51) February 2012 (39) January 2012 (32) December 2011 (32) November 2011 (36) October 2011 (27) September 2011 (36) August 2011 (51) July 2011 (44) June 2011 (44) May 2011 (38) April 2011 (23) March 2011 (35) February 2011 (24) January 2011 (39) December 2010 (35) November 2010 (70) October 2010 (50) September 2010 (27) August 2010 (35) July 2010 (33) June 2010 (50) May 2010 (29) April 2010 (7) March 2010 (1) February 2010 (1) January 2010 (1)
© MON NEWS AGENCY Copyright 2018, All Rights Reserved